Tena ilaina tokoa ny fanentanana Search Engine ho an'ny raharaham-barotra, indrindra amin'ny tontolon'ny tetikasam-pitiavanao?
Ankehitriny dia mihabetsaka ny olona mametraka ny fividianany amin'ny fampiasana ny hery lehibe sy ny fahazoana ny Internet. Izany no antony mahatonga ireo mpamily ho lasa toerana malaza indrindra hananganana fifanarahana an-tserasera ary hahazo izay zavatra rehetra tadiavinao. Ary ankehitriny ny ankamaroan'ny fividianana toy izany dia vita mora kokoa, satria mampiasa fitaovam-pikarohana fotsiny ny olona mba hiditra amin'ny fangatahana tenimiafina, ary amin'ny farany, hahita izay ilainy. Ary tonga eto ny sehatra SEO! Nefa ahoana ny fampiasana ireo tombontsoa goavam-be amin'ny Search Engine Optimization ho an'ny raharaham-barotra izay mihazakazaka amina mode-skipelina? Manoro hevitra aho mba hijery fohy fohifohy amin'ireo toro-hevitra fototra ireo - drip tip mini nautilus aspire. Manantena aho fa hanampy tetikasa maro amin'ny tetikasa fitaterana an-tsokosoko izy ireo mba ho tafavoaka velona amin'ny tontolon'ny tsenam-barotra feno herisetra hatrany am-piandohana. Eto izy ireo!
Manao ny fikarohana momba ny teny mavesatra amin'ny teny ratsy
Voalohany, manao fanamafisana ny mozika momba ny raharaham-barotra ianao, dia soso-kevitra mba hitadiavana fikarohana tsara fototra. Midika eto ianao fa mila mieritreritra teny sy fehezanteny sasantsasany, izay mety indrindra amin'ny orinasanao ianao, ary mety ho ampiasain'ireo mpampiasa amin'ny fikarohana karoka rehefa mitady ny vokatra na ny serivisy. Ny tetika dia ny mahita ny fifandanjana ara-pahasalamana indrindra eo amin'ny lazam-pokonolona sy ny fifaninanana mivaingana ao amin'ny niche. Ny tiako holazaina dia mety ho ny antsasa-manilan'ny fangatahana fikarohana toy ny "macbook pro 13", saingy tsy dia misy loatra ny "vidiny tsara indrindra ho an'ny macbook black pro 13 tavina mainty". Ataovy ao an-tsainao izany raha misafidy ny teny fanalahidy lava farany amin'ny tranonkalanao.
Manàna votoana mafonja ho an'ny vokatra mitombona
Tsarovy - ny votoatinao dia ny mpanjaka. Aza asiana ny fotoananao amin'ny ezaka hamoronana votoaty avo lenta, manan-karena amin'ny teny fanalahidy lava. Ny hevitra dia tsotra - mila ilainao fotsiny ny votoatinao toy ny informatika (vakiana - mahasoa) ho an'ny mpitsidika araka izay tratra. Raha manao izany ianao, dia miangavy anao ny hampiditra ny votoatin'ny tranonkala miaraka amin'ireo endri-tsarintany samihafa amin'ny alàlan'ny mpampiasa toy ny lahatsary YouTube. Izany dia hanome ny mpitsidika soso-kevitra tsara, toro-làlana, na famaritana vokatra sy torolàlana, ka hitarika amin'ny vokatra ara-barotra ambony kokoa. Mandritra izany fotoana izany, araho hatrany ny fanintanjahanao ao anatiny, indrindra indrindra amin'ny fomba fijerin'ny milina fikarohana. Ataovy izany, aza hadino fa ilainao ny hankasitraka ireo crawlers amin'ny fikarohanao, mba hijery tsara kokoa azy ireo, ary avy eo avoakany kokoa amin'ny valin'ny fikarohana Google. Izany no fomba tsara indrindra hidiran'ny orinasa misotro rindrambaiko an-tserasera, any amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao.
Ny asa tsara ho an'ny fanorenana fifandraisana
Ny iray amin'ireo lafiny manan-danja amin'ny Search Engine Optimization amin'ny raharaham-barotra dia rafitra fananganana rohy. Midika izany fa tokony hanana backlinks kalitao ianao hampifandray ny tranonkalanao amin'ireo loharanom-baovao an-tserasera mba hahazoana famandrihana bebe kokoa, ka noho izany ny fanamafisana ny fifamoivoizanao, ny fanamafisana ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao amin'ny valin'ny fikarohana Google, ary ny fampitomboana ny mpanjifa tsy misy mpandalina, izay azo niova ho tena izy. Aza atao tsinontsinoavina ny ezaka atao amin'ny famoahana lahatsoratra any anaty forum, vao haingana navoaka ny lahatsary YouTube, ary ny rohy amin'ny tambajotra sosialy samihafa. Mety ho lasa fitaovana azo antoka izy ireo raha ampiasaina amim-pahendrena. Raha ny amiko, dia manoro hevitra ny manampahaizana manokana ny manam-pahaizana aho hanao ireo asa ireo ho anao farafaharatsiny amin'ny alàlan'ny dingana voalohany amin'ny fivoaran'ny raharaham-barotra. Na inona na inona ny asanao dia tsy hanenenanao izany, azoko antoka.
Farany, ny tombotsoa azo avy amin'ny Search Engine Optimization amin'ny fandraharahana dia mety tsy mety amin'ny fehintsoratra roa na telo. Nefa manantena aho fa ny torolalana fohy napetrako dia hanampy ireo mpanjifany vaovao vaovao, noho izany dia hanao veloma eto aho!